Dagaal xoogan oo maanta ka dhacay gudaha Magaalada Bosaas | maakhir.com
Dagaal xoogan oo maanta ka dhacay gudaha Magaalada Bosaas
Bosaaso:- Wax saaka hiirtii waa bari uu dagaal dhaqaadhi ka dhacay Xaafada Biyo Kulul ee ku taala Duleedka Magaalada Bosaaso, dagaalkaas oo u dhexeeya Ciidamo tageersan Maamulka Puntland iyo Malayshi ka amar qaadata wasiirkii hore Dekedaha iyo Kaluumaysiga Puntland Siciid Maxamed Raage,waxana dagaalkaas laysu adeegsaday Hubka Cul Culus.
Dagaalkan oo sida la sheegay ay markii hore soo qaadeen Ciidanka Maamulka Puntland ayaa waxay damceen inay xoog ku galaan Guri ay ku jireen Boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo la sheegay inay xidhiidh dhaw la lahaayeen Wasiirkii Cade Muuse casilay dhawaan ee Siciid Maxamed Raage.
Ciidamo aad u tira badan ayaa weerar buuxa ku soo qaaday Gurigaasi iyaga oo ku garaacay Hubka Cul Culus waxan la sheegay inuu dagaalkaasi ka dhashay khasaare Lixaadle, dhimashada ayaa waxa la soo tabinayaa inay kor u dhaafayso ilaa 5- Askari halka aan war laga hayn Dhalinta guriga ku jirata.
Maamulka Puntland ayaa weerarka ay gurigaasi ku qaadeen ku macneeyay inuu ujeedadiisu tahay inay dhalintaasi ahaayeen kuwii Afduubay warihii Faransiiska ahaa ee dhawaan duleedka Magaalada Bosaaso lagu haystay,waxay kaloo sheegeen inay maleegayeen Falal Amaan daro ah.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Aminiga Puntland C/laahi Siciiid Samatar oo ah nin ay aad isgu dhawyihiin Cade Muuse Xisri ayaa gaashaanka ku dhuftay inay garaacayaan Gurigaasi ilaa ay is dhiibaan Dhalinta halkaasi ku jirtaa.
Wararka ayaa sheegeen inay Maamulka Puntland ku gacansaydheen waxgaradka Dhalintaasi oo la soo xidhiidhay si loo baaji inuu dagaalkaasi sii daba dheeraado.
Ilaa haatan Hugunka Rasaas ayaa laga maqalayaa Magaalada Bosaaso iyada oo dhamaan ay dadku tumanyihiin wadooyinka, Maamulka ayaa isna wada Abaabul xoogan oo ku aadan Dagaalkaasi.
« Abaaro xoogan ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah Gobolka Gal Guduud
Goobihii uu Dagaalku ka dhacay ee Magaalada Bosaaso ayaa Degan Galabta[Daawo Sawiro] »